Ukwakhiwa Komthamo - AfricArXiv
By UJohanssen Obanda, 3 izinyanga 2 izinyanga edlule
I-Ocean Acidification Africa (i-OA-Africa) iyinethiwekhi ye-pan-Afrika ebizwe ngokukhethekile ukuxhumanisa nokukhuthaza ukuqwashiswa kwe-acidification yolwandle (OA) nocwaningo e-Afrika.
By USam Dupont, 4 izinyanga 4 izinyanga edlule
Ngaphansi kwesihloko esithi Encouraging Preprint Curation and Review, i-ASAPbio ibambe i-design sprint yokwandisa ukuvezwa kwemibono emisha nesivele ikhona yokukhuthaza ukusikwa nokubuyekezwa kwangaphambi kokuprinta. Umcimbi ububanjelwe ngokubambisana noWellcome, iChan Zuckerberg Initiative, iHoward Hughes Medical Institute, iDORA, i-EMBO Press, i-PLOS, neLife. Funda kabanzi…
By TCC Africa & AfricArXiv, 8 izinyanga 5 izinyanga edlule
I-AfricArXiv isekela i-COAR ekufakweni kwayo ku- “Selection Repository Selection: Izindlela ezibalulekile”
Ngomhla ka-24 kuNovemba, i-2020 i-Confederation of Open Access Repositories (i-COAR) yashicilela impendulo kwiDatha repository Selection Criteria, yabelana ngezinto ezibakhathazayo nokuthi kungani lezi zinqubo zizoba yinselelo kwabanye abacwaningi nezinqolobane. Abamele amaphephabhuku, abashicileli kanye nezinhlangano zokuxhumana zezazi, Umphakathi we-FAIRsharing Community bahlangana Funda kabanzi…
Abalingani be-AfricArXiv ne-COS ukusekela ucwaningo lwe-pan-Afrika
Ngaphandle kwezinsizakalo zokushicilela ukufinyelela okuvulekile komphakathi wayo, i-AfricArXiv izosiza ngamathuba amaningi ezenzo eziqinile nezizalayo.
By I-AfricArXiv, 9 izinyanga 5 izinyanga edlule
I-TCC Africa enikezela ngezitimela eziku-inthanethi
Isikhungo Sokuqeqesha Kwezokuxhumana sesiqale ukunikeza izifundo online. UNksz Joy Owango, uMqondisi Omkhulu uphawule ukuthi Lokhu bekuyingxenye yecebo lethu lowezi-2019/2020, esilihambise kuMklomelo We-Invest2Impact futhi sawunqoba. Ngaphandle kwalokhu sijabule ngale ntuthuko futhi sibheke phambili ekusekeleni abacwaningi abaningi kanye nezifundiswa ngokuthi singaluthuthukisa kanjani ucwaningo lwabo Funda kabanzi…
By I-TCC Africa, 1 ngonyaka 5 izinyanga edlule